Abakhiqizi beKayak - I-China Kayak Suppliers & Factory
IPaddle Single Kayak Iyathengiswa
Cishe ama-20% alula kune-kayak ejikelezayo.
Isisindo esifanayo ku-Glassfiber kayak.
Iqine kakhulu kune-Glassfiber / KV / Carbon kayak.
Amapuleti enhlanganisela ye-ABS afakwe uphawu lwe-UV emelana ne-UV, angenza indawo ecwebezelayo okungakaze kube nayo kayak yokujikeleza.
Isikebhe esisodwa seKayak
Ukusebenza okuhle kakhulu:Ukwakhiwa kwe-polyethylene eyindilinga engu-1 kunikeza inhlanganisela yamandla nokuphikiswa komthelela izinto eziningi ezingeke zikwazi ukufana.
Idizayini eyingqayizivele: Lapho kudizayinwa i-SeaDog Angler, awukho umzamo owasindayo ekwenzeni ukusebenza okuhle kwe-kayak yokudoba ehlala ku-295cm / 9'8, ngenkathi kukhulisa ukunethezeka nokuzinza.
Abantu abangu-2 Abadobi Abadobi Abayinhloko
I-backrest enezinto ezijwayelekile ngokwazo iyinto emisha okufanele ishiwo. Ayigcini ngokunikeza ukusekelwa okuphezulu kwangemuva futhi ithuthukisa ukusebenza kwe-paddling kepha futhi kulula kakhulu ukunamathisela.
I-Sea Fishing Canoe Kayak
Le polyethylene kayak engajwayelekile iyathandwa ngabashushuluzi abomileyo abafuna isenzo se-kayak e-rotom eqinile, esheshayo, enamandla futhi ejabulisayo. Azikho eziningi kangako - futhi neCrunch nayo ibukeka njengengxenye.
Ipulasitiki Hardboat Ukudoba Kayak
Konke kumayelana nokusebenza kepha futhi kubukeka. Asikatholi ukubukeka okungcono okungu-11'5 '' ku-kayak yokudoba. I-Raider Angler mhlawumbe isikebhe esisebenza kahle kunazo zonke ekilasini laso emakethe namuhla.
Isikebhe Sokuqeqesha Abadobi Basolwandle Ababili
IDoubloon - imodeli entsha evela kuJolly Roger! Le compact tandem kayak iyasebenza futhi izinzile ku-510cm / 16'8 ”. Umklamo wesikebhe ulungiselelwe ukusebenza nokusebenza ukuzinza ukuvumela umuzwa omnandi futhi ophephile wabadayisi.
Ukuqeqesha iCanoe Kayak Pedales
Njengabagwedli beRaider bawela ukubukeka kweBhakabhaka. IBuccaneer ivelele kakhulu emanzini. Ku-14'9 '' / 450cm lesi sikebhe sosuku lokusebenza oluphezulu esinamakhono wokuvakasha asobala kufanele sibe nawo kunoma ngubani ofuna i-kayak yokuzithokozisa ngokuningi kunokujwayelekile.